Miisaanka Miisaanka Joogtada ah ee Shiinaha CW269 Warshadaha iyo Warshadda | AOLGA
• 30CM*30CM madal quraarado leh oo cabbirkiisu weyn yahay, ku habboon in loo istaago culeyska, waxayna ku habboon tahay inta badan dadka leh cagaha kala duwan.
4 dareeme sare oo xasaasi ah
• 4 dareeme sare oo xasaasi ah oo cagaha miisaanka leh ayaa keena saxnaan sare iyo khalad yar.
Muujinta LED aan la arki karin
• Muujinta LED -ka aan la arki karin dushiisa, oo aan la arki karin nalka LED -ka marka aan la isticmaalin inta uu LED -ku tusayo marka aad miisaamayso, taas oo ka dhigaysa mid nadiif ah. Caadi ahaan, miisaanka cad wuxuu ku jiraa LED cad halka cabirka madow uu ku jiro LED cas.
Sax sare miisaanka miisaanka:
• Galaas biyo ah ayaa si sax ah loo dareemi karaa iyadoo qiimaha qalin -jabinta uu yahay 10g.
Chip waxtarka sare:
• Hawlgal xawaare sare leh, sugitaan la'aan, waxqabad hufan.
• Iftiin cad oo jilicsan ayaa sidoo kale la heli karaa habeenkii
• Waxaa lagu daraa miisaanka marka aan la isticmaalin, akhriskuna si cad buu u muuqdaa marka la miisaamayo.
• Muujinta LED -ka qarsoon, akhrinta cad habeen iyo maalinba.
Beddel otomaatig ah oo caqli badan DAAR/DAMBE:
• Is -beddelka otomaatiga ah ON/OFF wuxuu baabi'iyaa naqshadda beddelka gacanta waxaana loo dallacsiiyaa dareeraha culeyska caqliga leh, kaas oo ku habboon iyo keydinta tamarta.
Dusha miisaanka isku dhafan:
• Qurux si fiican loo farsameeyay, dusha sare oo baaxad leh, miisaan ka raaxo badan.
Fudud, is haysta oo fudud:
• Iyadoo aan lahayn muuqaal baaxad leh, jirka caatada ah si fudud ayaa loo qaban karaa.
• Si fudud ayaa loogu kaydin karaa gees kasta, fudud oo qurux badan.
Xoogga afarta ah:
• Qaabaynta afar-dhibic iyo isku-xirka nooca buundada waxay keenaysaa xoog ka sii badan.
Naqshadeynta muuqaalka aadanaha:
1. Dhinacyo waaweyn oo wareegsan oo gacanta lagu sameeyay, siman oo jilicsan, yaraynaya burburka shilka.
2. Suumanka lugaha lidka-lugaha leh iyo cagaha culeyska caagagga oo culeyskiisu hooseeyo ayaa ka dhigaya mid xasilloon oo ka-hortagid leh in la helo badbaado labanlaab ah. Qaybaha muhiimka ah waxaa loo xafidaa nolosha dheer.
3. Maaddada polymer -ka hoose.
4. Qaab hal-gogol ah, boodh-ka-hortag iyo qoyaan-huwan si loo ilaaliyo qaybaha asaasiga ah
Agabyada la xushay si loo hubiyo tayo sare:
• Muraayadda dhagaxa ah ee la adkaysan karo oo leh qaab-dhismeed waxay leedahay iska-caabin saamayn fiican leh iyo iska-caabbinta cadaadiska sare.
• Dusha sare ee miisaanka leh ayaa si qurux badan loo been abuuray, waayo -aragnimada tayada ayaa la casriyeeyay
• Daawaha Aluminium
Muujinta LED -ka aan la arki karin weigh Miisaanka & xidhitaanka otomaatiga ah
2x1.5V batteriga AAA
Hore: Iskeelka Miisaanka Korantada ZW320
Xiga: Miisaanka Miisaanka Elektaroonigga CW280
Miisaanka otomaatiga ah
Miisaanka Miisaanka Bilaashka ah
Miisaanka Miisaanka Xirfadlaha
Miisaanka Miisaanka Yar
Miisaanka Joogtada ah
Miisaanka Cabbiraadda Culayska
Miisaanka Miisaanka ee Cabbira Baruurta Jirka
Kaabsal La Saari Karo ...
BLDC Motor Timaha qalajiyaha ...
Uumiga Dharka Gacanta ...
Muraayadda Elektiroonigga ah ...
Timaha qalajiyaha QL-5920